Kungakhathaliseki ngempumelelo wamafutha Fleming kusukela hemorrhoids? Izibuyekezo salesi sibhedlela ongaphandle izokwethulwa kulesi sihloko. Futhi kuyo, uzofunda indlela ukusebenzisa nomuthi wathi, uma unazo contraindications engemihle.
Izithako futhi isembozo izidakamizwa wendawo
Yini okungukuthi ukwakheka okungukuthi amafutha Fleming kusukela hemorrhoids? ochwepheshe lezivakashi basikisela ukuthi lokhu ukulungiselela ngezindleko zemithi engamakhambi. Siqukethe izithako ezisebenzayo ezifana marigold, abathakathi hazel, AESCULUS, menthol ne-zinc oxide. Kufanele kuphawulwe ukuthi njengenhlangano ingxenye asizayo lokhu imithi iqukethe petrolatum.
Ngo iphakheji angathengwa hemorrhoids wamafutha Fleming? Yokusetshenziswa kwe-yangaphandle ejenti kuqukethwe iphakethe amakhadibhodi. Njengoba for ikhambi homeopathic, itholakala amabhodlela epulasitiki kanye amathini 25 g noma 15 g
I kwemithi isinyathelo wangaphandle kanye lendawo izidakamizwa
Uyazi yini ukuthi ukwenza wamafutha Fleming kusukela hemorrhoids? Ukwakheka nomuthi kuwukuthi uyakwazi ezikhandla eqeda ukuvuvukala, analgesic, elwa namagciwane kanye omiswe umphumela.
ukusetshenziswa njalo izidakamizwa kubhekwe ngcono microcirculation izinqubo ezicutshini nokuphefumula kwezimila yeselula. Wamafutha ngesivinini kokuzalwa kunciphisa ukuminyana emithambo yegazi futhi kukhulisa izivikelo zomzimba womuntu. Ngaphezu kwalokho leli thuluzi ivumela ngokushesha ukuqeda ukulunywa (isib ekwelapheni atopic dermatitis).
Kungani proctology ngakho ngokuvamile enqunyiwe ukwelashwa hemorrhoids wamafutha Fleming? Ukusebenza kahle okusezingeni eliphezulu zomuthi okuye kungase kutholakale ngochwepheshe. Yingakho-ke livame ukusetshenziswa ekwelapheni zangaphakathi nezangaphandle hemorrhoids. Liphinde kubhekwe isidakamizwa ngenkuthalo esetshenziswa non-ukuphulukiswa elina thrombosed hemorrhoids. It has nemiphumela ezuzisayo phezu ulwelwesi lwamafinyila we ingemuva, ingquza, ama-capillary kanye ngemithambo isimo sisonke.
Properties of izidakamizwa wendawo
Yini property i Fleming wamafutha kusukela hemorrhoids? Ukubuyekezwa (yokwakheka izidakamizwa seyenziwe ngenhla) sibeke ukuthi asetshenziswe ngendlela efanele ukulungiselela zendawo zangaphandle ivumela:
constrict udonga semithambo we ingemuva;
ukubuyisela isakhiwo nolwelwesi lwamafinyila;
zishukumisa izicubu umsoco ingquza kanye ingquza wonkana;
ukunciphisa ukuminyana e ngemithambo;
ukunciphisa hemorrhoids zangaphakathi nezangaphandle;
ukususa ukopha, ubuhlungu kanye ukulunywa kule ingquza;
ukuvikela mucosa emathunjini kusuka kabusha ukulimala;
ngcono ukugeleza kwegazi.
Izinkomba ukusetshenziswa kwezidakamizwa wendawo
Ukuze lokho ngezinhloso ebekiwe wamafutha Fleming for hemorrhoids? Izibuyekezo proctologists sisho futhi ukuthi izidakamizwa okukhulunywa ilungele ekuqedeni hemorrhoids zangaphakathi nezangaphandle. Ochwepheshe bathi ukuphumelela kwalesi izidakamizwa kubonakala kakade emva kwezinsuku ezimbalwa ukusetshenziswa njalo izimali. Vospalennnost nodes kubonakale incipha, lula isimo ezingokomzwelo nezingokomzimba isiguli.
Yini enye inhloso ingasetshenziswa wamafutha Fleming? Hemorrhoids (ukubuyekezwa ekwakhiweni samanje, sethula ngezansi) - lokhu akuyona inkinga kuphela okuyinto siphatha wathi nomuthi. Isikhathi esining impela, odokotela linqume yona dermatitis kanye iguliswa vasomotor rhinitis.
Ngakho, singaphetha kahle ukuthi izidakamizwa kuyinto jikelele ikhambi homeopathic ukusetshenziswa nezokusigcoba nezesikhumba, proctology futhi izifo elingenhla ipheshana zokuphefumula.
hemorrhoids Fleming sika wamafutha: Izimo
Kuyinto imfihlo ukuthi cishe zonke izidakamizwa babe contraindications ukusetshenziswa kwazo. Futhi wamafutha uFleming hhayi ngaphandle. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi Izimo zomuthi alikho ngempela. Ngokusho imiyalelo, ngeke isetshenziselwe labo babe ukungabekezeleli futhi ezwela landa yezingxenye ejenti asebenzayo, kanye nezingane isikhathi esingaba iminyaka emibili.
Indlela yokusebenzisa Fleming wamafutha kusukela hemorrhoids?
Nobufakazi mayelana nesimo idivayisi ukuyisebenzisa kalula bese umane. Nokho, umthamo kanye indlela isicelo lithembela ngokuphelele injongo ngawo ebekwe udokotela ukuba khona.
Njengoba kushiwo ngenhla, kubukwe e proctology nomuthi iqondiswa ukwelapha hemorrhoids. Kulokhu, lesi sidakamizwa isetshenziswa endaweni elikhanyayo nge swab ukotini. Feza lezo zinqubo zonke izinsuku, izikhathi ezintathu ngesonto.
Uma izidakamizwa saphathwa ekwelapheni of hemorrhoids yangaphakathi, bese-ke sethulwa esincane ngokusebenzisa Imibhobho esemzimbeni ekhethekile. Uma kunesidingo, ukuphathwa ISIZINDA avuvukele kungaba liphindwe. Nokho, kuyinto efiselekayo do ngakho ngemuva kokuxoxisana udokotela.
Sebenzisa umuthi i ENT-umkhuba futhi nezesikhumba
Manje, niyazi, njengoba amafutha Fleming esetshenziselwa hemorrhoids. Nobufakazi abonisa ukuthi izidakamizwa esetshenziswa proctology, ukwazi indlela yokubhekana ngokuphumelela kulo msebenzi. Nokho, kwezinye izimo, singasebenza e ENT umkhuba.
Ukuze ekwelapheni vasomotor rhinitis nomuthi liyadingeka ayelele sinuses ngemva kokufaka ku turundy. Ukuze kuzuzwe nomphumela oqabulayo zomuthi kufanele igcinwe ekhaleni imizuzu 5-11. Ngaphezu kwalokho, namafutha kungenziwa nivame ulwelwesi lwamafinyila kwekhala kathathu ngosuku angu-2.
Ngo umkhuba dermatological wamafutha Fleming kumele kusetshenziswe kanje: a izidakamizwa sisetshenziswa nsuku zonke izingxenye abathintekayo kwesikhumba. Le nqubo kwenziwa kabili ngosuku (mhlawumbe ekuseni ngesikhathi sokulala). Isikhathi yokwelapha kumele singeqi amasonto amabili.
Ukusebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sokukhulelwa
Kungenzeka yini ukusebenzisa wamafutha Fleming kusukela hemorrhoids phakathi nenkathi yokukhulelwa? Izibuyekezo ongoti ngale ndaba anikeze impendulo esiqondile. Sebenzisa wathi nomuthi ngesikhathi sokukhulelwa can. Phela, noma ubani akuyona imfihlo ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa yomzimba wowesifazane sibhekana nokucindezeleka okukhulu. Ngemva kokuzalwa kwengane, kanye nomshikashika kwabobulili bubuhle kakhulu ngokuvamile kukhona izinkinga kanye emithanjeni yegazi. Kulabo abesifazane abaphethwe ukuvuvukala ISIZINDA ngaphambi nje ebamba isisu, kungaba sibhebhetheka namandla ikakhulukazi phakathi sokukhulelwa. Ukuze unciphise lokho isimo omama (ezingokomzwelo nezingokomzimba) Esikhathini esizayo, obstetricians ngezinye izikhathi ezinqunyiwe wamafutha Fleming kusukela hemorrhoids.
Ngo sokukhulelwa, izidakamizwa esebenzayo ingase isetshenziselwe izinkomba ezifana rhinitis kanye dermatitis.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukusetshenziswa kwezimali zendawo babengenalo nomphumela ongemuhle ukuthuthukiswa umbungu, kanye isimo nempilo yomama. Nokho, ngaphambi kokufaka isicelo imithi ngesikhathi sokukhulelwa ingane liyadingeka kuyadingeka ukuze ubonane onguchwepheshe. Phela, kuphela udokotela abanolwazi uzokwazi ukwabela ilungile futhi ephumelela kunazo lwemithi zokwelapha.
Imiphumela emibi emva kokwelashwa
Njengomthetho, izidakamizwa kubhekwe ibekezelelwe kahle impela. Ukusetshenziswa Its cishe akwenzeki kuholele emiphumeleni imiphumela engathandeki. Ngakho ivunyelwe ukuthi isebenzise uhlelo Fleming wamafutha nge hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa.
Izibuyekezo ochwepheshe wazise iziguli ukuthi lokhu ingenye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu futhi iphephile. Nokho, akufanele ngaphandle nesenzakalo komzimba nezinto.
Amacala ukweqisa izidakamizwa kanye nezidakamizwa ekuxhumaneni
Le ncwadi akukho lwazi mayelana amacala ukweqisa izidakamizwa asebenzelana ngayo imithi. Kukhona futhi akukho ulwazi izidakamizwa ekuhlanganyeleni yalesi izidakamizwa nezinye izidakamizwa. Nokho, la maqiniso, akusho ukuthi ungasebenzisa Fleming wamafutha ezimathonsi. Uma ukuqokwa izidakamizwa wathi uphuza neminye imithi, khona-ke kufanele njalo udokotela yabo.
Utshwala futhi Ukudla
Regulations lebhalwe ekwakhiweni wendawo ayinazo ulwazi mayelana ukuthi kungenzeka ngesikhatsi ukwelashwa ukuphuza utshwala. Nokho, ochwepheshe bathi yisiphi isifo okuyiwona imithi inikezwa ukuze ukubika, asikisela bashabalala ngokuphelele utshwala. Lokhu kungenxa yokuthi uphuzo oludakayo nomthelela ekwandeni emithanjeni kanye imithambo yegazi, okuyinto Akwamukelekile ukuthi hemorrhoids.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ngesikhathi ekwelapheni hemorrhoids avuvukele, proctology aphoqelelwe ukuba aqoke isiguli sakhe ukudla okuqinile, okusho ukwenqaba ukudla ngokweqile okunosawoti futhi okubabayo. Ukuhambisana yonke le mithetho ngeke kubonakale ngcono ngempumelelo oqabulayo imithi nezokusigcoba.
nemibandela ukudayiswa, eshalofini yokuphila futhi isitoreji indlela
Wamafutha Fleming ukhululeka Pharmacy ngaphandle udokotela. Gcina nomuthi okungcono in a cool endaweni emnyama lapho izinga lokushisa ingeqi degrees 26. Impilo kwezimali lwasendaweni izinyanga 24.
Analogs, futhi izindleko ukulungiselela yangaphandle
Yini esikhundleni Fleming wamafutha kusukela hemorrhoids? Izibuyekezo proctologists yabonisa nalokhu okulandelayo analogue lokhu kusho: wamafutha heparin wamafutha Vishnevsky, "Troxevasin", "Bezornil", "Proktozan", "Gepatrombin" nabanye.
Ngokuqondene inani lentengo lomuthi, akusiyo eliphezulu kakhulu futhi ruble 250-310 jar ngayinye. Le mali kungaba okwanele umuthi lendawo ku izifundo eziningana zokwelapha.
Isikimu eseduze yokwelapha of hemorrhoids acute
Hemorrhoids - udaba olubucayi, okungase nazo ngamunye. Akubona bonke iziguli uyakwazi ukuxoxa ngakho nodokotela wabo. Ngakho-ke, iningi labo elizama ngayo ukubhekana ke bebodwa.
Ngakho indlela ukwelapha hemorrhoids neso elibukhali kangaka? Ukuze wenze lokhu, kufanele usebenzise izinsiza hhayi kuphela wendawo, kodwa futhi imithi ngomlomo eziqinisa Imithambo yegazi. umphumela Inxanxathela ku hemorrhoids ukusiza uziqede ngesikhathi esifushane.
Ngokuvamile, hemorrhoid acute aqoke izindlela ezilandelayo:
Endaweni. wamafutha Fleming sika isetshenziswa endaweni elikhanyayo kathathu ngosuku futhi emva ukunyakaza wamathumbu ngamunye.
Oral. Tablets "Detraleks" noma isiphi esinye isidakamizwa kokuba izakhiwo angioprotective futhi venotonic. Ngokusho umyalelo, kusho indlela okufanele zithathwe eziyisithupha amaphilisi ngosuku zokuqala ezine izinsuku (ezintathu ekuseni okufanayo kusihlwa), kanye esisele izinsuku ezintathu - abane amaphilisi (ezimbili ekuseni okufanayo kusihlwa).
I echazwe ukwelashwa Isikimi abayisibonelo luncike nesineke, kobukhulu ezifweni nakwezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Uma ngabe le yokwelapha is hhayi efakazelwe ngempumelelo, kufanele ngokushesha phenya Proctologist.
Kubhekwe umenzeli sangaphandle ethandwa kakhulu phakathi iziguli. Inombolo enkulu imibono ngalokhu izidakamizwa lihlotshaniswa hemorrhoids ukwelashwa. Abantu abasebenzisa ama-mbiko umuthi Fleming bendawo ukuze ngempumelelo yalo okusezingeni eliphezulu zokwelapha. Iziguli bathi kusukela ezinsukwini zokuqala zokwelashwa kukhona ukwehla okukhulu ubuhlungu kanye ukulunywa endaweni rectal. ukusetshenziswa eside imithi (ngesonto ezingaphezu kweyodwa) cishe ngaso sonke isikhathi kuholela resorption ephelele hemorrhoids, kanye ukuphulukiswa imifantu endaweni bendunu.
Ngaphandle kwenzeka ngempela izimpendulo eziningi kusukela ezigulini eziye wasebenzisa leli khambi izimpawu efana ukubukeka hemorrhoids (ukulunywa njalo, ngopha ingquza , njll). Futhi kulokhu wamafutha muhle kakhulu ukuqeda yonke emizweni ezingezinhle. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa wedwa okungukuthi kuphela kudingekile ayinzima amafomu lesi sifo. Ngo exacerbations Kunconywa njalo ubonane Proctologist abazakuba ezomisa yokwelapha kuhlanganiswe.
Ngaphezu ekwelapheni hemorrhoids wamafutha Fleming livame ukusetshenziswa ngoba impatho rhinitis. Iziguli ukubika ukuthi ngo-ukusetshenziswa isifo lezo zimali bendawo bangakwazi ukuqeda acinene ukucinana amakhala yisisu ngosuku ukwelashwa kwesibili. By endleleni, in the itheku ivumela izidakamizwa ngokuphelele futhi ngokushesha asuse zonke izimpawu okungafunwa lesi sifo ngosuku 10th.
Esinye isici esihle izindlela kubhekwe ukuthi akanayo imiphumela emibi kanye contraindications.
Kusho "Broncho-inyanga." imfundo
"Ceftriaxone" antibiotic. incazelo
Medicine 'Terbinafine'. imfundo
Yikuphi amaphilisi Umshini wokuwasha izitsha ukukhetha?
A kwekhanda elula ku izinwele ezinde nezinto ukwelukwa
Carp Crucian e ukhilimu omuncu. Recipe kusukela endulo
Growing utamatisi izithombo kanye Ngena
"Dandelion Wine" - omunye amanoveli umhlabeleli yomlobi eziqanjiwe ezingokwesayensi omkhulu Ray Bredbei
Kusho ugebhezi umphetho kanjani ngeminyaka?
Kanjani isisekelo pyure- wedwa, eziningi ongakhetha